लिंग परिवर्तन गरेर महिला बनिन् सन्ध्या- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पर्सा — सहयात्री समाज वीरगन्जकी कार्यक्रम संयोजक सन्ध्या लामाले आफ्नो पुरुष लिंग परिवर्तन गरी महिला पहिचान कायम गरेकी छन् । उनले अगस्त ८ मा थाइल्यान्डको बैंककस्थित प्रतुनाम पोलिक्लिनिकमा सेक्सुअल रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गरेकी हुन् । उनले झन्डै १ दशक तेस्रो लिंगीको पहिचान बोकेकी थिइन् ।
मुख्य चिकित्सक डा. थेपसहितको टोलीले ५ घण्टाको शल्यक्रियापछि उनको पुरुष लिंग हटाएर महिलाको यौनांग प्रत्यारोपण गरिएको हो । शल्यक्रियाको ३ दिनअघि चिकित्सकसँग ‘साइको सेक्सुअल काउन्सिलिङ’ बाट उनले लिंग परिवर्तनपछि हुने शारीरिक परिवर्तन तथा अपनाउनुपर्ने आवश्यक सावधानीजस्ता विषयमा परामर्श लिएको बताइन् ।
लामो आरामपछि कार्यालयको जिम्मेवारी पुन: सम्हाल्न आएकी सन्ध्याले लिंग परिवर्तनपछि नौलो अनुभूति गरेको बताइन् । ‘मेरो सपना थियो शारीरिक रूपमा पनि महिला पहिचान बनाउने,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पूरा भएको छ, वास्तवमा यो विज्ञानकै चमत्कार हो ।’
महिलाको जस्तो पाठेघर प्रत्यारोपण भने नगरेको उनले बताइन् । त्यसका लागि करिब दोब्बर रकम लाग्ने भएकाले आफूले तत्काल रकम जुटाउन नसकेको बताइन् । यसबाहेक उनले पुरुष स्वर परिर्वतन गरी महिलाजस्तो बनाउन घाँटीको शल्यक्रिया गर्न पनि बाँकी छ ।
नेपालमा लिंग परिवर्तनको सुविधा नभएकाले थाइल्यान्ड पुगेर गर्नुपरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार लिंग परिवर्तनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च लागेको छ । हेटौंडा मूल घर भएकी सन्ध्या ४ दाजुभाइ–दिदीबहिनीमध्ये कान्छी हुन् । परिवारको राजीखुसी र सहमतिबाटै आफूले लिंग परिवर्तन गरेको उनले सुनाइन् ।
२०१२ मा उनले बैंककबाटै शल्यक्रिया गरी महिलाझैं स्तनको विकास गरेकी थिइन् । नेपालमा लिंग परिवर्तन गरी पुरुषबाट महिला भएका करिब २ दर्जन व्यक्ति रहेको उनले बताइन् । तर, महिलाबाट पुरुष बनेको आफूलाई जानकारी नभएको सन्ध्या बताउँछिन् ।
उनले ७ वर्षयता तेस्रो लिंगीको हकहितमा संलग्न संस्थामा कार्यरत छिन् । उनले २००८ मा काठमाडौंमा विश्व बैंकले आयोजना गरेको तेस्रो लिंगीको ‘मिस ब्युटी एन्ड ब्रेन’ प्रतियोगिताको ताज पहिरिएकी थिइन् । जितसँगै उनले बैंककमा भएको तेस्रो लिंगीको ‘मिस इन्टरनेसनल क्विन’ प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसरसमेत पाएकी थिइन् ।
आकर्षक व्यक्तित्वकै कारण सन्ध्याले विभिन्न चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोमा नृत्यको अवसर पनि पाएकी छन् । लिंग परिवर्तनपछि अब अवसरको खोजीमा आफू पहिले काठमाडौं जाने र त्यहाँ सोचे जस्तो नभए मुम्बई जाने तयारीमा रहेको उनले बताइन् । ‘सकेसम्म स्वदेशमै प्रतिभा देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा अवसर पाए यतै बस्छु । नभए मुम्बई गएर संघर्ष गर्छु ।’
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ १९:२०
तीन दसकसम्म एकै उम्मेदवार
सातौं पटक चुनाव लड्दै
कार्तिक २२, २०७४ आश गुरुङ
लमजुङ — नेपाली राजनीतिमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चर्चित नाम हो । उनी पार्टीका सचिव तथा संगठन प्रमुख समेत हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको नाम जति चर्चित छ, जनतामाझ उनी त्यति चर्चित थिएनन् भन्नलाई तीन दसकबीचको चुनावी नतिजा हेरे पुग्छ ।
नेपाली राजनीतिमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चर्चित नाम हो । उनी पार्टीका सचिव तथा संगठन प्रमुख समेत हुन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको नाम जति चर्चित छ, जनतामाझ उनी त्यति चर्चित थिएनन् भन्नलाई तीन दसकबीचको चुनावी नतिजा हेरे पुग्छ ।
२०४३ मा जनपक्षीय उम्मेदवारको रुपमा पहिलोपटक चुनावमा होमिएका उनी २०७० को संविधानसभा चुनावबाहेक बाँकी ५ वटै चुनावमा पराजित भएका हुन् । तीन दसकयता लमजुङ क्षेत्र २ (हाल प्रदेश ख) का एक्ला उम्मेदवार हुन् उनी । अहिले समेत गरी उनले सातौंपटक चुनाव लड्दैछन् ।
उनले पहिलो पटक ०४३ मा हारे । ०४८ मा कांग्रेसका रामबहादुर गुरुङसँग दोस्रो पटक पराजय व्यहोरे । आफ्नो क्षेत्र छोडेर आएका रामबहादुरसँग पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०५१ को मध्यवधी निर्वाचनमा पनि हार व्यहोरे । ०५६ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसकै हरिभक्त अधिकारीसंग पराजित भए । तत्कालीन माओवादी पहिलो र एमाले तेस्रो पार्टी बन्दा कतिपय वरिष्ठ नेताले हार्दा भने उनी ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा जिते ।
उनीसँग पराजित भएका दिलबहादुर घर्ती अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार छन् । घर्तीसँग बाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ चुनावी मैदानमा छन् ।
देवप्रसादसँगै शान्ति प्रक्रियापछिको मन्त्रिमण्डलमा सँगै रहेका पृथ्वीसुब्बा केन्द्र छोडेर प्रदेशमा चुनाव लडिरहेका छन् ।
दोस्रो संविधान सभा चुनाव २०७० को प्रचारप्रसारमा बेंसीसहर आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘पृथ्वीसुब्बालाई जिताएर पठाउनोस्, म मन्त्री बनाएर पठाइदिन्छु’ भन्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, जनताले उनलाई जिताउनुको सट्टा हराइदिए ।
संसदमा आदिवासी जनजाति समूह (ककस) मा लागेर ब्राम्हण क्षेत्रीविरुद्ध बोलेको आरोप खेपेका उनले त्यही आरोपका कारण हार व्यहोरे अनुमान छ । अहिले उनी प्रदेश नं. ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने उद्घोषसहित चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएका छन् ।
बाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरे उनको मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुला रहनेछ । तर, उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिन कांग्रेसका निवर्तमान सभापति कृष्णप्रसाद कोइराला ‘चर्को’ रुपमा लागेका छन् । कोइरालाले भने, ‘यो पहिल्यैदेखि कांग्रेसको ठाउँ हो । अहिलेको चुनावमा पनि यो ठाउँ हामी जित्छौं । कसैको कुनैपनि नाराले जनतालाई छुँदैन, जनताले कुरा बुझेका छन् ।’
उनी विकासको नारा लिएर गाउँगाउँमा चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । उम्मेदवार गुरुङ चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि विकास गर्ने आश्वासन दिएर चुनाव प्रचारप्रसारमा होमिएका छन् ।
२, लमजुङमा प्रदेश सभा (ख) को सदस्यका लागि बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका एमाले केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर: आश गुरुङ/कान्तिपुर
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ १९:०१